Ngwurugwu Germinated Brown Rice Ọ Na-eri Ụwa? - Page 2
Ị nọ ebe a: Home / Nri Ngwọta Ụwa / Ngwurugwu Germinated Brown Rice Ọ Na-eri Ụwa?
1 Ebube YIELD USA - July 2010
1.1 Ọ bụ Germinated Brown Rizị bụ Azịza nye Agụụ? site na Peggy Bradley
1.1.2 Nri Acha
1.1.3 Usoro na-eto eto Maka GBR osikapa
1.1.5 Uru Nri
1.1.6 Uru ahụike
1.1.7 GBR kpochapụrụ ma sie ya na teacha
Ebube YIELD USA - July 2010
Ọ bụ Germinated Brown Rizị bụ Azịza nye Agụụ? site na Peggy Bradley
Riz bụ nri kachasị mkpa n'ọtụtụ mba ndị ka na-emepe emepe ma bụrụ ihe oriri na-eri nri maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ndị bi n'ụwa. Ngalaba Ngalaba Agriculture (United States Department of Agriculture) (USDA) na-eme atụmatụ ịkọ ihe ọkụkụ ụwa dị na 2007 ka 2008 iji bụrụ ihe dịka 432 nde tọn. Na 2005 mpaghara e ji mee ihe maka osikapa bụ ihe dịka 387 nde acres. A na - eduzi nyocha ugbu a n'ịzụlite ahịhịa na-emepụta anụ ọkụkụ maka anụ ụlọ dị ka nyocha banyere uru nke osikapa osikapa, nke bụ ugbu a akụkụ nke mgbanwe nke nri.
Ọrụ nlekota nke Derek Cuddeford, onye edemede nke "Hydroponic Grass" (1989) na ndị ọzọ nọ na 1980 na-eduga ná nghọta nke pulitere na mkpụrụ ọka ndị a kụrụ n'ubi nwere ihe oriri dị elu karịa mkpụrụ osisi dina. Nke a mere ka ndị hydroponics malite iwepụta nri maka anụ ụlọ wee gaa n'ihu nyochaa ihe oriri maka ụmụ mmadụ. Na 2004 na Nzukọ Mba Ndị Dị n'Otu, otu akwụkwọ si Japan nyere ụwa ọkwa ngwaahịa ọhụrụ a kpọrọ Germinated Brown Rice (GBR) ma ọ bụ GABA osikapa (Shoichi & Yukihiro, 2004).
Brown osikapa osikapa agba aja aja karia osikapa osikapa. Riz osikapa na-enwe nanị ebe a na-ewepụ ọka. Ejichaghi osikapa, enweghi nkpuru a na-adighi ike, abughi ihe ndi na-akpata vitamin, mineral, fiber na acids fatty.
Usoro nke milling rice to rice rice results results in loss of about 10 percent of the product. Ọ bụrụ na ndị mmadụ amalite na-eri osikapa osikapa kama na-acha ọcha, enwere ike iwepụ 38.7 nde acres na mmepụta ma ọ bụ 43 nde ọzọ nri nri dị.
N'ụwa nile, a na-eme atụmatụ na mmadụ 850 nde mmadụ agụụ na-agụ. Nke a dum, ọ dịkarịa ala, nde 550 nọ na Asia. Ndị Asians na-eri ihe dịka osikapa 300 kwa afọ. Ngwunye osikapa ndi ozo site na ngbanwe nke osikapa osikapa nwere ike ibu ihe di mkpa iji dozie onu.
Riz osikapa nwere otutu ewu ewu na 70s na nri nri macrobio, nke kwadoro osikapa osikapa. Isi nsogbu bụ osikapa osikapa ahụ ji nwayọọ nwayọọ belata ma osikapa e rere ere n'ụwa niile ka na-acha ọcha.
Usoro nke milling osikapa osikapa ogologo oge ka esi esi nri ma nwee ntakiri osikapa osikapa na-esi na ya enweghi ezi ihe. Ihe ngosi banyere 10 pasent nke ngwaahịa a.
Ngwá osikapa agba aja aja ọhụrụ sitere na Japan bụ n'ezie osikapa agba aja aja ọ bụla e kpochara tupu ya esi nri. A na-edebe osikapa na okpomọkụ nke ihe dịka 100 F maka awa asatọ na 24 iji malite usoro mmepụta.
A na - eji osikapa emepụta ihe ka ọtụtụ n'ime ọmụmụ ihe na - arụpụta ihe na - emepụta ihe na - edozi (0.5 ka 1.0 millimeters ogologo) site na kernel, nke a makwaara dị ka Germinated Brown Rice (GBR).
A gwo osikapa GBR site na nhazi ma ugbu a enwere ike esi ya ya na obere oge. Ọ dịkwa mfe igwu ala ma nwee ezigbo ekpome ọkụ. Na Japan, ọ na-enwe mmetụta dị ukwuu ma na-eguzobe ahịa na ụlọ ọrụ ole na ole na-amalite ịzụ ahịa GBR n'ụwa nile.
Usoro na-eto eto Maka GBR osikapa
Ufodu ihe omumu banyere GBR di ugbua iji nyere anyi aka ighota usoro iji nye ihe oriri di elu. A na-enweta ihe kachasị mma amino acid mgbe nwa osisi ahụ malitere igosi. Ikpocha osikapa a na-ebelata ihe oriri. Mgbe ị na-enyocha ihe dị iche iche pH (site na 5.5 ruo 9.0) enwere obere ihe dị iche iche na nri oriri. Ọnọdụ okpomọkụ dị mkpa; Igwe oyi na-ekpo ọkụ chọrọ oge ka ogologo ma ọ bụ nwere ike ghara ikwe ka germination ma ọlị. Obere ọka osikapa osikapa yiri ka enwere elu nke GABA.
Saikusa, Horino na Mori (1994) chọpụtara na Gamma-Amirobutyric acid (GABA) mụbara n'ụzọ dị ịrịba ama mgbe osikapa osikapa tinye na 104 F mmiri ruo awa asatọ na 24 awa. Enzyme Glutamate decarboxylase na-emegharị Glutamic acid n'ime Gamma-aminobutyric acid. Germination na-eme ka osikapa dị elu, nke na-eme ka ọ dị mfe iji esi nri ma rie dị ka osikapa a na-egbuke egbuke.
Nlekọta ihe oriri na-edozi ahụ nke Germinated Brown Rice and White rice
100G / kwa akọrọ akọrọ Germinated osikapa agba aja aja Energy 345Kcal Protein 7.3G Total fat 2.9G Fatty fat 0.58g Cholesterol 0mg Carbohydrate 77g Dietary fiber 2.8g Sodium (Na) 2.1mg Calcium (Ca) 8.1mg Iron (Fe) 1.1mg Magnesium (Mg) 74mg Zinc (Zn) 2.1mg GABA 16.5mg Vitamin B1 0.3mg Vitamin E 1.7mg Inositol 452mg Isi Iyi: AsiaRICE Biotech,, Inc. Nka osikapa 363Kcal 7.0G 0.9G 78G 0.4G 4mg 5mg 0.3mg 22mg 1.4mg 1.5mg 0.08mg 0.4mg 96mg
"Rizị na Germinated Brown nwere ụba karịa, okpukpu atọ nke lysine, amino acid dị mkpa, yana 10 ugboro GABA. "
Usoro germination arụ ọrụ enzymes na-enye osikapa aka ịzụlite ọkwa dị elu nke ụfọdụ amino acids, karịsịa Gamma-Aminobutyric Acid (GABA). GBR nwere ọtụtụ eriri, okpukpu atọ nke lysine, amino acid dị mkpa, na 10 ugboro ole GABA dị.
Okada et al. (2000) kọrọ na oriri GABA maka izu asatọ gbanwere ihe mgbaàmà kachasị nke ọma n'oge a na-ahụ maka afọ menopausal na ụkọ oge dịka ụra, somnipathy na ịda mbà n'obi. Jeon et al. (2003) chọpụtara na GBR nwere ike ịdị irè maka igbochi imeju imeju.
Enwere ugbua a na-eme nnyocha na uru nke GBR. O yiri ka iri nri GBR nwere ike belata ọbara mgbali, kọlestụl dị ala, weghachi ọrụ akụrụ, imeju imeju, belata ike ọgwụgwụ na nchekasị ma nwee ike igbochi kansa.
Nnyocha sayensị na GBR na-egosi na ngbanwe dị mfe a na-eri kwa ụbọchị nwere ike inye aka belata ọrịa na-adịghị ala ala ma melite ndụ.
O doro anya na anyị nwere ike ime ka ọtụtụ ọrịa anyị na-adịghị ala ala n'oge a site n'ikike osikapa ọcha ka e wee mepụta ma rie.
"Nyocha nke sayensị na GBR na-egosi na ngbanwe dị mfe a na-eri kwa ụbọchị nwere ike inye aka belata ọrịa na-adịghị ala ala ma melite ndụ. "
Enzymes na-achịkwa n'ime osikapa nke na-enye ihe oriri na-edozi maka uto na-arụ ọrụ mgbe osikapa agba aja aja na-agbanye. Nke a na - eme ka enzymes rụọ ọrụ ma na - eme ka amino acids dị ka L-lysine (ihe dị mkpa maka ụlọ protein niile) na -aminobutyric acid (GABA) .Vitamins na antioxidants na - amụbawanye, dịka ọnụọgụ digestible. A naghị ewepụta ihe ndị na-edozi ahụ dị ọhụrụ na osikapa na-adịghị na-emepụta n'oge germination, karịsịa prohibitlendopetidase inhibitor, nke nwere mmetụta na mgbochi na ọgwụgwọ mbụ nke dementia na Alzheimer's.
GBR kpochapụrụ ma sie ya na teacha
Enwere mkparịta ụka na Intanet nke na-ebu nri ma na-esi nri osikapa GBR na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ tii na-eme ka àgwà ya dịkwuo mma. Ruo ugbu a, o yiri ka enweghi ule ma ọ bụ data n'ezie iji kwado ihe a. Otú ọ dị, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-apụtaghị na ọ ga-emerụ usoro ahụ ma nwee ike ime ka ekpomekwu ahụ dịkwuo mma.